HAFATRA HO AN'NY TARANAKA
Anaka, ireto misy hafatra vitsivitsy,
Holazaina sy ho tsindriana etoana.
Zaraina, dia ny eny mbola tsaroana,
Amin'ny fiteny mazava sy mahitsy ;
Satria heverina, efa tonga ny fotoana.
Mandeha, miroso moramora mantsy
Ny andro, sy ny volana ary ny taona ;
Ny ray aman-dreny efa eo ambavahaona.
Ohatra ny akondro ambanana antsy ;
Manambara zava-tsarotra eo anoloana.
Ny mikasika ny fiatrehana ny fiainana,
Dia ilaina ny milofo sy ny miezaka,
Atao foana ny fanaovana tomban'ezaka,
Sy ny fijerena ny fotoana mba hisainana,
Ary miarina sy mioitra, fa tsy mifezaka.
Manaova izay ahatongavana olom-banona,
Mba ho tabia sy ho reharehan'ny Firenena,
Amin'ny zava-bita izay ho hita sy ho jerena.
Manabe koa ny taranaka mba ho vanona,
Ho sambatra, fa tsy an'isan'ireo mosarena.
Izay ankinina ho atao sy iandraiketana ;
Ataovy tsara foana amim-pahamarinana.
Alaviro ny mety ho fanaovana dika vilana,
Soraty tsara madio ao anatin'ny firaiketana.
Mba mahitsy ny fijery, fa tsy misompirana.
Ataovy ny hahatsara fototra ny tokantrano,
Ho tany lonaka hivelaran'ireo taranaka.
Mba hiray hina fa tsy hisamatsamaka ;
Tsy ho azon-tsampona, tsy hidiran'angano,
Fa tena ho sambatra ny vady aman-janaka.
Aza atao ambanin-javatra, ny mivavaka ;
Manankina ny fiainana amin'Andriamanitra.
Mba ho hipoky ny fifaliana, sy ho salanitra,
Ny tokantrano sy ny taranaka tsy ankanavaka.
Ka ny fiainana an-tany, toy ny any an-danitra.